Best audio edekọ: Record audio na ala
Olee otú Record Audio na Best Audio teepu
> Resource> Video> Olee otú iji Record Audio na Best Audio teepu
"Hey ụmụ okorobịa nwere ike ị ụmụ okorobịa-enye m ihe ọ bụla aro maka ezi software na dere ada ndị kasị mma na ị nwere ike idezi ụda nwekwara .... ekele, minty"
Unu onwe unu kwa-achọ gburugburu maka ezi ọdịyo ndekọ software dị ka Minty? Nwere ike ị chọrọ ka ịdekọ audio si ewu ewu music weebụsaịtị ka Spotify ma ọ bụ ọbụna ụfọdụ video weebụsaịtị. Ebe a bụ ezi omume na-enyere gị aka inwe gburugburu nsogbu a ozugbo na ihe niile. Gụgharia Audio teepu, ndị kasị mma audio edekọ, na-enye gị ike idekọ ọ bụla ọdịyo si weebụsaịtị. I nwekwara ike dezie ọmụma banyere dere ọdịyo na-eme ka mgbanaka-aj u. Ka nwere aka-na anya na otú iji ya n'okpuru.
1 Wụnye kasị mma ọdịyo ndekọ software
Mbụ ka-esi njikere. Download a omume na awụnyere na kọmputa gị. Ị nwere ike chọpụtara na o nwere abụọ nsụgharị. Na-ahọrọ nri otu maka gị na kọmputa.
2 Record audio-enweghị àgwà ọnwụ
Mepee omume na pịa Record bọtịnụ na n'elu aka ekpe akuku. Mgbe ahụ chọọ audio na weebụsaịtị. Anyị ga-Spotify dị ka ihe atụ. Mepee a song on Spotify na-egwu na ihe omume ga-amalite Ndekọ ozugbo.
I nwere ike na-akpọ dum playlist on Spotify mgbe usoro ihe omume ike idekọ niile ndepụta ma kewaa ọ bụla song dị ka nkịtị oge n'etiti.
Cheta na: otu ihe banyere bụ na ị ga na-a-eji ire ụtọ njikọ Ịntanetị ka ịdekọ a zuru ezu audio faịlụ.
3 Nyefee gaa na obere ngwaọrụ maka playback (nhọrọ)
Ọ bụ nnọọ mfe nyefee ọdịyo na obere ngwaọrụ a na usoro. Họrọ songs ị chọrọ nyefee na pịa Tinye ka iTunes bọtịnụ. Ị ga-chọpụtara na songs ga-atụkwasịkwara iTunes na i nwere ike ịhụ ha na SAR playlist. Mgbe ahụ ị pụrụ mmekọrịta gị Apple ngwaọrụ dị ka iPod.
E wezụga Apple ngwaọrụ, nwere ike ị chọrọ nyefee ndị ọzọ MP3 Player. Dị nnọọ nri-pịa ọdịyo ma họrọ Mepee na nchekwa ịchọta ebe ndị ahụ e dere audio a zoputara. Mgbe ahụ ịdọrọ faịlụ gị MP3 Player aka.
Ndị ọzọ karịa enye kasị mma ọdịyo ndekọ ọrụ, ị nwekwara ike iji ihe omume na-eme ka mgbanaka-aj u. Pịa mgbịrịgba na akara ngosi na a bitmap nke ọdịyo ga-apụta. Họrọ nke ọ bụla so na bitmap na-azọpụta gị ntị. Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie ọmụma banyere audio, ị nwere ike nri-pịa ọdịyo ma họrọ View zuru ezu. Mgbe ahụ pịnye ọ bụla masịrị ọmụma na nri mmapụta kọlụm. Ụda mara mma, ọ bụghị ya? Dị nnọọ ibudata ya ka a na-agbalị onwe gị.
Olee otú Play na Dezie JVC Everio Series cam Videos Mac (Yosemite gụnyere)
Olee otú Play MP4 on PS3
FLV ka DivX Ntụgharị: Olee otú iji tọghata FLV ka DivX